Political Page ပုလဲသွယ်: Jawaharlal Nehru Memorial Lecture by Daw Aung San Suu Kyi on 14-11-2012
Jawaharlal Nehru Memorial Lecture by Daw Aung San Suu Kyi on 14-11-2012
Smt. Sonia Gandhi, Chairperson and Trustees of the Jawaharlal Nehru Memorial Fund cordially invite you to the Jawaharlal Nehru Memorial Lecture by Daw Aung San Suu Kyi
Wednesday, 14 November 2012, 6:00 p.m.
Plenary Hall. Vigyan Bhawan
Maulana Azid Road, Hew Delhi
• ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၃-၁၁-၂ဝ၁၂ မနက်တွင် နယူးဒေလီသို့ရောက်ပြီး ၁၈ အထိနေမယ်။
• ၁၄ ရက် ညနေ ၆ နာရီမှာ (ဂျဝါဟာလားလ်-နေရူး) အမှတ်တရ မိန့်ခွန်းကို (ဗစ်ဂျန်-ဗာဘမ်) မှာ ပြောကြာမည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများလည်း တက်ရောက်ခွင့်ရကြမည်။
• ၁၆ မနက်မှာ (ပရောစပက်-ဘားမား) ကျောင်းကို စစ်ဆေးပြီး မြန်မာ ကွန်မြူနတီနဲ့တွေ့မည်။
• ၁၆ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာ (လေဒီ ရှရီ ရမ် ကောလိပ်) ကိုလည်ပတ်မည်။
• အိန္ဒိယ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ တွင်လည်းစကားပြောကြားမည်။
• အိုင်တီနည်းပညာ ထွန်းကာရာမြို့သို့လည်းလည်ပတ်ရန်ရှိသည်။